Visa na USA & Ego pada na nkwa Akwụkwọ & Ọrụ!
Tinye gbakwunye CV na Dubai City Company
Visa na USA, I nwere ike idenye aha gị maka ndụ ọhụrụ na United States of America. Companylọ ọrụ anyị ga - enyere gị aka ịmalite ọrụ na ibi na US Ọrụ a gụnyere a ọrụ n'ime ụbọchị 60 + Ego na-ekwe nkwa Ego!. Ọzọkwa, ọrụ a dị ezigbo mma ilele expats.
Visa na USA & Ego azụta nkwa nke ego
Got nwere USA
Nweta Visa na USA!
Ọrụ n'ime ụbọchị 60 + Ego na-akwụghachi Ego!
Visa na USA - Anyị hụrụ ndị US n'anya! ma ọ bụrụ na ị na-eche ka enwere ụzọ ọ bụla kwụọ ụgwọ otu ugboro ma nweta ọrụ visa + na United States of America -enweghị akwụ ụgwọ ọzọ. Companylọ ọrụ Dubai City bụ ụzọ iji nweta visa ọrụ ma ọ bụ visa azụmahịa ma ọ bụ jikọọ na ndị ọzọ na US
Kedu otu i siri mara na anyị bụ ụlọ ọrụ ziri ezi? The .gov pụtara na ọ bụ ọrụ gọọmentị. Citylọ ọrụ Dubai City na-arụ ọrụ na a gọọmentị ole na ole na enweghị onye ọ bụla gọọmentị websaịtị inyere gị aka ịnweta Visa na United States. Ọzọkwa, ọtụtụ mgbe na-akwụsị na .gov ma ọ bụ .mil. Bụrụnụ ndị anyị na ha rụkọrọ ọrụ. Yabụ, ịkekọrịta ozi ndị chebaara bụ isi. Yabụ, n’ikwu okwu n'ozuzu, gbaa mbọ hụ na ị nọ na saịtị gọọmentị etiti. Companylọ ọrụ anyị na - akwado ndị ahịa anyị mgbe niile na ụzọ a siri ike nke ndụ ọhụụ.
Nweta Visa na United States America!
Nweta akaụntụ Visa ụlọ ọrụ Dubai na-enye gị ezigbo ohere ịmụtakwu banyere ndụ na US companylọ ọrụ anyị mepụtara obodo maka ndị isi mba ụwa iji nyere ha aka inweta Visa United States na jidere. Site na ọrụ anyị ị nwere ike ibugharị na US ọzọ, jikọta ya na azụmahịa kacha mma na ndị na-elekọta ọrụ na US na Canada. Anyị bụ ndị a kacha mara amara na-eweta Visa na Middle East.
Nke a bụ ohere gị iji were nzọụkwụ mbụ gị North America ije !. Ọtụtụ nde ndị si mba ọzọ kwabataralarị na New York City na Los Angeles. Detuo ohere gị maka United States America Visa. Ma ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ ndị ọzọ maka gị !.
Lee anya n'okpuru dịka ọmụmaatụ:
Buru onye mbu iji nyochaa "Visa to USA & Money Back Guarantee" kagbuo zara
Unu ga-adị wee banye na biputere a nyochaa.